मंगलवार, ६ असोज २०७७, रबिन थपलिया । सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । असोज ६ । नेपल प्रहरीका ४८८ इन्सपेक्टरको सरुवा भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार उनिहरुको सरुवा गरेको हो । सरुवा सुचि अनुसार महानगरीय प्रहरी बृत्त लैनचौरमा प्रज्वल थपलिया सरुवा भएका छन् । थपलिया वडा प्रहरी कार्यालय लमही दाङबाट लैनचौर सरुवा भएका हुन् । त्यस्तै प्रहरी बृत्त बानेश्वरमा अपुर्व ढुंगानालाई ल्याइएको छ उनि यस अघि इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढ बारामा कार्यरत थिए । प्रहरी परिसर भक्तपुरमा सुवास बुढाथोकी, प्रहरी बृत्त सात्दोबाटोमा हिम खत्री, अपराध महाशाखामा आयुस प्रसाद जोसी सरुवा भएका हुन् ।
त्यस्तै, पोषणराज थपलिया महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, हेम कुमार थपलिया जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो महिला तथा बालबालीका अ.अ शाखा महाराजगञ्जमा नवराज न्यौपानेलाई सरुवा गरिएको छ ।
कस्को सरुवा कहाँ ?
सरुवाको पुरा बिबरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस